မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းသို့ေ? - Yangon Media Group
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းသို့ေ?
တောင်တွင်းကြီး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (MCHT) က ဂျပန်နိုင်ငံလုပ် ခေတ်မီ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးအားကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းသို့ လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ် ကုက္ကိုခွကျေးရွာ (ဗိဿနိုး မြို့ဟောင်း) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားသို့ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့် နှင့်ဇနီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ခင်မောင်အေးနှင့်ဇနီး၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့် ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော် မင်းတို့တက်ရောက်၍ အခမ်းအနားကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည့်ညွန့်နှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်အေးတို့က အမှာစကားပြောကြားကြပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန္ဒာခင်က လူနာတင်ယာဉ် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ နာရေးကူညီမှု အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူက လူနာတင်ယာဉ်အတွက် အသုံးပြုကိုင်တွယ်မှု သင်တန်းပေးခြင်း၊ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းနှင့် ဒေသခံ ဦးကိုကိုနိုင်တို့က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကြကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဟန်လင်း ဒေသကိုလည်း လူနာတင်ယာဉ် တစ်စီး ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သရေခေတ္တရာဒေသကိုလည်း ခေတ် မီလူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးအား ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု လှူဒါန်းသည့် ခေတ်မီလူနာတင် ယာဉ်၏တန်ဖိုးမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၇ဝဝ ဖြစ်ပြီး လူနာတင်ယာဉ်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ စီစဉ် မှုဖြင့် ဒေသခံ ၁၂ဝ တို့အား သင်တန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိဿနိုး ဒေသအတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၁ ရွာအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင် မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပါတီဝင် အမျိုးသမီးထု တွေ့ဆုံပွဲ မန္တလေးမြိ
ရေဖြူမြို့နယ် ရေပူစမ်းတွင် အပန်းဖြေခရီးသည် အဝင်များလာသဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်
ကလေးမြို့နယ် လယ်ယာမြေများ စက်မှုလယ်ယာမြေ အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက် JICA ကူညီမည်
ချစ်သူပြန်ထားဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ဂျန်နီဖာအနစ္စတန်
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဆင်ရောက်ကုန်းရွာ အလယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၎င်းင်းတို့၏ ကျေးရွာ၌ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေသူများအား မော်လမြိုင်နှင့် ဘားအံမြို့တို့၌ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
စင်ကာပူတွင် ပြည်တွင်း၌ ဆင်စွယ်များ ရောင်းချနေမှုကို ပိတ်ပင်မည်